हेलिकोप्टर दुर्घटनाको सम्भावित कारण खुल्यो, थाहा पाउने सबै चकित — Imandarmedia.com
एजेन्सी। भारतका चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ तथा पूर्वसेनाप्रमुख विपिन रावत चढेको हेलिकोप्टर दुर्घटनाबारे विभिन्न अडकलबाजी हुन थालेका छन्। रावतसहित १३ जना सवार भारतीय वायु सेनाको एमआई १७ भी ५ हेलिकोप्टर बुधबार दिउसो तमिल नाड्डुको कोनोरमा दुर्घटना भएको थियो। हेलिकोप्टरमा रावतकी पत्निसमेत सवार थिइन्।
दुर्घटनाबारे तत्काल अनुसन्धान गर्न भारतीय वायु सेनाले आदेश दिएको छ। रक्षा मन्त्रालयले दुर्घटनाबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न बाँकी छ । विज्ञहरुका अनुसार रावत चढेको हेलिकोप्टर दुर्घटनाका केही सम्भाव्य कारण यस्ता छन्।
१. खराव मौसमः वायु सेनाको एमआई १७ भी ५ हेलिकोप्टर दुर्घटनाको प्रमुख कारण खराव मौसम भएको प्रराम्भिक विवरणमा जनाइएको छ। वायुमन्डलको हुस्सु र लो भिजिविलिटीका कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने पूर्वचालकले बताएका छन्।
‘दुर्घटनाको मुख्य दोषी मौसम हुने गर्छ। पहाडको मौसम सामान्यतया खराब हुने गर्छ। तसर्थ रावत चढेको हेलिकोप्टर दुर्घटनाको मुख्य कारण मौसम हुन सक्छ,’ एमआई १७ भी ५ हेलिकोप्टरका पूर्वचालक अमिताभ रन्जन भन्छन्।
२. विद्युतका तार: पूर्वसेनाप्रमुख रावत चढेको एमआई १७ भी ५ हेलिकोप्टर दुर्घटना मानव वस्तीवाट टाढा भएको थियो। तर, हेलिकोप्टर विद्युतको तारमा ठाेकिएकाे हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
३. प्राविधिक समस्याः एमआई १७ भी ५ हेलिकोप्टरका पूर्वचालक अमिताभ रन्जनका अनुसार प्राविधिक समस्याका कारण पनि हेलिकोप्टर दुर्घटना भएको हुन सक्छ।
उनी भन्छन्, ‘हेलिकोप्टरहरु नयाँ छैनन्। तालिमप्राप्त र व्यावसायिक भएकोले चालकले जस्ता सुकै हेलिकोप्टर पनि चलाउने हिम्मत गर्छन्। अकस्मात प्राविधिक समस्याका कारणा दुर्घटना भएकाे हुन सक्ने उनको अनुमान छ। ‘हेलिकोप्टरमा प्राविधिक समस्या थिएन भन्न सकिदैन् उनी भन्छन्।
४. डाँडामा ठोक्किएको हुनुसक्नेः हेलिकोप्टर दुर्घटनाको प्रकृति हेर्दा डाँडोमा ठोकिएको हुन सक्ने विज्ञहरुले अनुमान गरेका छन्। दुर्घटनास्थल डाँडोनजिक भएकोले हेलिकाेप्टरले हाइट लिँदा दुर्घटना भएकाे हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यो पनि : सेना प्रमुख चढेको हेलिकप्टर दुर्घ’टना ग्रस्त, के छ अबस्था ? भारतमा उच्च सैनिक अधिकारी चढेको हेलिकप्टर दुर्घ’टना भएको छ। चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ विपिन रावतसहित उच्च अधिकारी चढेको हेलिकप्टर तामिलनाडुको निलगिरि नजिकै कुन्नर भन्ने ठाउँमा,
दुर्घ’टनामा परेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्। इन्डियन एयर फोर्सले पनि ट्विटरमार्फत सेना प्रमुख रावतसहितको टोली रहेको एमआई-१७ भी ५ हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको बताएको छ।
दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टरमा रावतसहित १४ जना सवार रहेको इन्डियन एक्सप्रेसले जनाएको छ। हेलिकप्टरमा सेना प्रमुख रावतकी पत्नी पनि रहेको समाचारहरुमा जनाइएको छ।
दुर्घ’टनामा परी ४ जनाको मृत्यु भएको भारतीय समाचार माध्यमहरुले जनाएका छन्। तामिलनाडुको सुलुरस्थित सैन्य शिविरबाट वेलिङटन जाने क्रममा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको थियो।
दुर्घ’टनास्थलबाट ४ जनाको शव बरामद भएको र गम्भीर घाइते ३ जनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईले उल्लेख गरेको छ। तर मृतकको पहिचान भने खुलाइएको छैन।
समाचारहरुका अनुसार सेना प्रमुख रावतलाई अस्पताल भर्ना गरिएको र उनको अवस्था गम्भीर रहेको छ। रावत भारतको पहिलो चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ हुन्। रावतलाई गत वर्ष जनवरीमा चिफ अफ डिफेन्स स्टाफमा नियुक्त गरिएको थियो।
त्यसअघि उनी भारतीय स्थल सेनाको प्रमुख थिए। दुर्घ’टनाग्रस्त हेलिकप्टरमा रावत, रावतकी पत्नीसहित १४ जना सवार रहेका थिए। भारतीय वायु सेनाले दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन भन्दै छानबिन गर्न आदेश दिएको छ।